Caawiyayaal suuxdinta Job Description / Waajib Sample Oo Doorarka - JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / Caawiyayaal suuxdinta Job Description / Waajib Sample Oo Doorarka
Caawiyayaal suuxdinta Job Description / Waajib Sample Oo Doorarka
Yacquub June 28, 2016 Uncategorized Leave a comment 808 Views
Caawinta anesthesiologists gudaha hawlgallada ee suuxdinta ku saabsan farsamooyin qalliin oo kontrakt. Waxaad dhawrtaa sumcad bukaanka iyo daryeelka sahayda in uu yahay bukaan inta lagu guda jiro nidaamka qalliinka.
Imtixaan doorasho ee alaabta qolka in ay ka shaqeeyaan, daawo, iyo gaasas.
Ku lug koorsooyinka, siminaaro, ama raad dheeraad ah in ay yihiin xirfadleyda sii updated of tabo cusub ee anesthesiology.
Sii qaliin maamulka marinka hawada oo ay ku jiraan intubation cunaha ama adeeg.
Falceliyaan si xaaladood oo degdeg ah oo ay soo kicinta wadnaha iyo (CPR), taageerada nolosha qalbiga asaasiga ah (BLS), lifesupport wadnaha sare (ACLS), ama nolosha-taageero horumarsan carruurta (SAAXIIBADA).
Pre-imtixaanka iyo qabsato hababka suuxdinta maraakiibta iyo saacado.
dalab kormeerka, waxbaridda clinical ama tababarka shaqaalaha meelaha sida dhaqanka suuxdinta tusaale ahaan.
tijaabooyin ama noocyada baaritaanka wada ururiya in uu yahay falanqaynta.
Ururi oo soo sheegaan clientsA pre- soohan caafimaadka.
Kormeer iyo warbixin individualsI ka hor inta lagu jiro xilliga soo gudbiyaan-suuxdinta.
Hagaha anesthesiologists ee la socodka dadka ay ka mid yihiin electrocardiogram (EKG), cadaadis toos ah halbowlaha, cadaadiska arooriyaha dhexe, gaaska dhiigga halbowlaha, hiimotokiriit, ama description joogtada ah ee kulaylka, Neefta, cadaadiska jidhka iyo qalbiga-rate.
Ku caawi in sahayda xeelado nolosha-taageero casri ah oo ay ku jiraan, kuwaas oo daaweyn isticmaalka intra ama ah ee hirka sare hawo qalabka taageerada wadnaha -arterial.
In samaynaya hababka suuxinta sida tusaale ahaan spinal iyo daaweynta epidural caawin anesthesiologists,.
Ka caawi soo baxay iyadoo la isticmaalayo wax ku ool ah tabaha raadraaca sida sanka halbowlaha sambabka baaritaan spectral iyo kartiyo.
siiya jidhka, alaabta dhiig, ama dheecaan daacad.
Maamul heerar suuxinta inta lagu guda jiro habab.
Bixin suuxinta , Waxuu curiyaha, ama daawo qalabka hoose koorsada of suuxdinta ah.
Career Waxqabadka Qualification
Akhrinta weedho fahamka-fahamka iyo weedho kooban ee DoCS la xiriira shaqada.
Active-Dhageeysi-La soo wacyiga oo dhan waxa ay dadka kale la yidhi, isagoo wakhti ay ku ogaadaan waxyaabaha la dhisay, yaabban arrimaha sida ku haboon, oo aan mesmerizing waqtiyo khalad.
Soo saara-tiimbanaynay si guul leh ku qoran sida ku haboon baahida dhagaystayaasha.
Sheekaysiga-ka hadlayay dadka kale in la xuso xaqiiqada wax ku ool ah.
Xisaab-Kafaa'iidaysiga xisaabta si uu u xaliyo dhibaatooyinka.
Science-Isticmaalka farsamooyinka iyo tilmaamaha sayniska si loo xaliyo dhibaatooyin.
Halis xukunka ka fakaraya-Adeegsanaya iyo sababaynta in la aqoonsado liito iyo talanti oo wajiyada, fikradaha ama jawaabaha kale si diiddani.
Active-Learning-oge muhiimadda faahfaahinta cusub ee labada mustaqbalka iyo dhibaato xalinta iyo go'aan-qaadasho ee hadda jira.
Xeeladaha-Kafaa'iidaysiga oo gaaray dhaqanka iyo geedi socodka saxda ah ee xaaladda teachingORtutorial markii waxbarasho ama aad bartid waxyaabaha cusub Barashada.
Hubinta-Hubinta / Qiimaynta shaqeynayaan naftaada, qof oo dheeraad ah, ama ururrada ka fiirsan tallaabo lagu saxayo ama si ay u abuuraan uqaadineed.
Doonista Social Perceptiveness oge othersI iyo fahamka sababta ay fal sida ay sameeyaan.
Dexterity-Bedelidda falalka marka la eego dhaqanka othersI.
dadka kale qancinta-dawarsanayay, in wax laga beddelo tallaabooyinka ama fikirradoodii.
Dejinta-Helidda wada kuwa kale oo isku dayay in ay heshiiyaan kala duwanaansho.
Tababarka-tababarka dadka kale sida saxda ah in ay wax ka qaban.
Orientation-firfircoon Company doonaya habab si looga caawiyo dadka.
Complex Lagu Xallinayo Dhibaatada-Aqoonsiga dhibaatooyin adag oo critiquing macluumaadka lala tixgelin iyo in la soo saaro xal kale oo la hirgeliyo dawayn.
Hawlgallada Falanqaynta-Kormeerida caddaymaha item iyo shuruudaha si ay u sameeyaan qaabka a.
qalabka Engineering Design-jaan ama samaynta iyo hindisaha in ay bixiyaan rabitaanka shakhsiga.
qalab iyo sort qalabka ee loo baahan yahay in hawl Qalabka Selection-Go'aansiga.
taararka wajigeeda-rakibidda, alaabta, qalab, ama baakadaha in guud ahaan buuxiyaan shuruudaha.
Sireed-curinta barnaamijyo computer ah loo isticmaali karo in tiro badan yihiin.
Operation Tracking-Daawashada tilmaamayaasha dials, ama calaamadaha calaamadaha dheeraad ah si loo hubiyo in mashiinka si sax ah u fulineynin.
Operation iyo taabta-qabashada hawlaha qalabka ama farsamooyinka.
Qalabka Dayactirka-fulinta adeegyada joogtada ah ee qalabka iyo aqoonsashada marka.
sababo dhib-Go'aaminta lagu maareeyo qaladaad iyo doorashada sida ay u sii wadi ku saabsan wax kasta oo ka mid ah.
nidaamyada ama alaabta isticmaalka khayraadka loo baahan yahay si qamaar-hagaajinta.
Quality Control Imtixaanka-
Talada iyo Go'aan-qaadashada tixgelin kharashka guud iyo faa'iidooyinka falalka kuwa la filayo in la helo mid ka mid ah ugu habboon.
Systems Falanqaynta-Go'aansiga sida nidaamka ah waa inay u qabtaan iyo sida isbeddel ah ee hawlaha, nno, iyo sidoo kale deegaanka saamayn ku yeelan kara saamaynta.
falalka ama calaamadaha waxqabadka nidaamka iyo si waafaqsan gool of mishiinka Methods Qiimeynta-Go'aaminta, tallaabooyinka loo baahan yahay in la xoojiyo ama ka shaqeynayaan xaq u.
dadka kale Time Management-Xakamaynta’ Munaasabaddan oo daqiiqad shakhsi ka mid ah.
Kormeerka Money-Go'aaminta sida doolar loo adeegsan doono in ay leeyihiin hawsha dhammeeyo, iyo iibka ku saabsan kharashka.
Kormeerka Product Methods-In qofka oo arkaya dhinaca isticmaalka habboon ee qalabka, hiilaadka, iyo alaabta si dhab ah loo baahan yahay in shaqada qaarkood sameeyaan.
Kormeerka Shaqaalaha Resources-xiiso, dhismaha, iyo dadka hagaya sida ay u shaqeeyaan, kala ah shaqsiyaadka ugu waxtarka badan ee shaqada.
Diploma High-School (ama GED ama High-School isu Certificates)
Career Management Skills Horudhac ah
Iskaashiga – 93.33%
Welwelin ku saabsan Kuwo kale – 94.13%
gaynta Stress – 98.40%
hallayn – 96.40%
Focus on Qoto – 99.60%
Horumarin – 87.17%
Adoo ka fakaraya Analytical – 90.63%